Home Wararka Meydad hor leh oo laga helay goobtii uu qaraxa ka dhacay xalay.
Meydad hor leh oo laga helay goobtii uu qaraxa ka dhacay xalay.
Waxaa sii kordhaya khasaaraha uu geestay weerarkii xalay lagu qaaday dhismayaal ku yaalla Wadada Maka Al-mukarama ee Magaalada Muqdisho.
Ilaa iyo 20 Ruux ayaa laga soo saaray dhismayaasha qaar ee ku yaallay Wadada Maka Al-mukarama sida ay warbaahinta u sheegeen Madaxda Gaadiidka Gurmadka deg deg ah.
Ciidanka Gaashaan ayaa soo afjaray howlgalkii bilowday xalay, kaasoo aay ku guul dareysteen in aay soo afjaraan ciidanka Booliska Gobolka Banaadir oo daacadda u ah RW Kheyre.
Waa markii ugu horreysay taariikhda oo aay kooxda shabab laga saari waayo goob aay qabsadeen muddo ka badan 24 saacadood